Umthandazo onamandla kaPaul Saint. ? [Isebenza kakhulu]
Umthandazo onamandla weSt. U-Saint Paul, kunye no-Saint Peter, uthathwa njengenye yeenkokheli eziphambili zeCawa yamaKatolika kumaxesha okuqala obuKristu. Wayengumthunywa wevangeli omkhulu, okwagqibela ngokukhokelela ekubeni azingelwe abulawe ngokunqunyulwa intloko. Uthathwa njengomkhuseli wezithulu, ungoyena mntu Unamandla anabantu abaninzi abazinikeleyo kunye noMthandazo weSt Ngokuqinisekileyo inokukunceda ukufezekisa ubabalo lwakho.
1 Umthandazo onamandla weSt
2 Umthandazo weSt. Paul ukufezekisa ubabalo
3 Inguquko yomthandazo ka-Saint Paul
4 Umthandazo wokholo kuPaul oNgcwele
«OoPaul oNgcwele ozukileyo, owayengumtshutshisi wegama lobuKristu
Uye waba ngumpostile ovuthayo ngenxa yenzondelelo yakho.
Kwaye ukwazisa igama loMsindisi uYesu
Kude kube sekupheleni komhlaba wabandezeleka,
Ubuso, ukuxulutywa ngamatye, iingozi,
Iintshutshiso zazo zonke iintlobo kunye,
Ngapha koko, uphalaza lonke igazi lakho
Ukuya kwehla okokugqibela
Ubabalo lokufumana njengemfesane yenceba kaThixo,
Unyango lwezifo zethu.
Ukukhululeka kweengxaki zethu,
Ngenxa yezi zinto zobu bomi
Siphakamise kwinkonzo kaThixo,
Kodwa soloko usenza sithembeke ngakumbi
NguPaul oyiNgcwele umpostile
Umthandazo weSt. Paul ukufezekisa ubabalo
“Owu nguPaul Paul oPhakamileyo ongumPostile, owathi ngumtshutshisi wamaKristu waba ngumpostile omkhulu, usenza siphile elukholweni kwaye sisindiswe ngenceba esiyenzayo.
Ukuba ngokuzithethelela kwakho siyakwazi, siyamthanda uThixo, kwaye ke kungcono silandele uYesu Krestu. Vuka uninzi lwabapostile abangcwele, sinike uncedo lwakho ubabalo lokuguquka kwemihla ngemihla kwaye ukhuselwe kuwo wonke umgibe wotshaba. Sincede ngokukhethekileyo (ngeli xesha usixelele oluphi ubabalo ofuna ukulufikelela), ubabalo esiludinga kakhulu.
Inguquko yomthandazo ka-Saint Paul
“Phambi kobunzima bobubi obutyekele ebubini, Saint Paul, siyakukhalela; siyanibongoza ngesisa, ngesithembiso sanaphakade, esisindisayo. Nje ukuba acinezele iCawe, uthando olungcwele lwachukumiseka. Kwaye abo babetshutshisa bamkela okhuselayo. Olo thando lokuqala lugcina imemori ethembekileyo. Kuba kudikidiki kwaye kubuthathaka kuzisa ubabalo nethemba. Uthando lwakho maluphumelele uthando olungahoyi bubi; Iimpikiswano azimkhathazi, kwaye azikho iimpazamo ezibulalayo. O lixhoba elikholisa izulu, bantu abanothando nokukhanya, umkhuseli othembekileyo weCawa, mkhusele kwaye usikhokele. Dumisani uBathathu Emnye ongunaphakade, uHosanna, amandla, uloyiso. Ibhaso lomlo olungileyo kunye nawe usinika lona, ​​eluzukweni. »
Umthandazo wokholo kuPaul oNgcwele
“Ewe, Pawula, uthe: Ndenze konke okusemandleni ukuze wonke umntu azise iindaba ezimnandi zoSindiso kubo bonke abantu.
Vuka kum lo mnqweno ovuthayo wezithunywa zevangeli!
Ndinike isibindi sokuqhubela phambili ngenkuthalo ehlaziyiweyo kunye nokuzinikela ngokupheleleyo kuYesu Krestu, oyindlela, iNyaniso kunye noBomi.
Ndithethelele, mna Pawulos omkhulu, ukuze ndilandele umzekelo wakho, ukuba andibomi, kuba nguKristu ohleli kum.
Ndenze umpostile omkhulu kunye nerediyetha ye-Divine Master ebomini bam bonke, ndisebenzisa ngothando kunye nokholo ngazo zonke iindlela zonxibelelwano.
Ndiyakuthembela, Mpostile oyiNgcwele uPaul.
Ukongeza kwi Umthandazo kaSanta paulBona kwakhona: